LEGO Harry Potter 76388 Hogsmeade Village သို့အလည်အပတ်သွားရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး
31 / 07 / 2021 01 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 181 Views စာ0မှတ်ချက် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဆောင်းရာသီကျေးရွာ
သင် LEGO Harry Potter အတွက်သီးသန့်အစောပိုင်းလျှော့စျေးရရန်ရှာဖွေနေလျှင်အချိန်သည်အနှစ်သာရဖြစ်သည် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်.
၈၅၁ အပိုင်းအစနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုပြီးခဲ့သည့်လကစင်ပေါ်သို့သာရောင်းချခဲ့ပြီးမနက်ဖြန်အထိအမေရိကန်တွင်မရောင်းပါ။ Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများမရ။ ကုဒ်ကိုအသုံးပြု BF153 လက်လီရောင်းချသူများ၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်သည်eကိုပေးပါမည်xtra နောင်ဝယ်ယူမှုများအတွက်သုံးစွဲရန်အမှတ် ၅% ပြန်ယူပါ။
Honeydukes နှင့် The Three Broomsticks တို့ကိုတရားဝင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ချိသောအဆောက်အအုံနှစ်ခန်းတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုထပ်တိုးသည်။ မင်းက Potterhead တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင်သူတို့ရဲ့နှင်းထုခေါင်မိုးတွေကသူတို့ကိုတိုးပွားလာတဲ့ Winter Village စုဆောင်းမှုတိုင်းမှာကြီးကြီးမားမားထပ်တိုးတစ်ခုအနေနဲ့နေရာပေးတယ်။
76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ပုံမှန်အားဖြင့်ယူကေ၌ ၆၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်လက်လီရောင်းချသော်လည်း Jadlam ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုဒ်သည်ယူရို ၅၅.၂၁ သာကျသည်။ မနက်ဖြန်ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ယူကေစံတော်ချိန် ၂၃.၅၉ တွင်သက်တမ်းကုန်လိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာမနက်ဖြန်အသစ်များနှင်းများပြိုကျမှုမတိုင်မီအရသာရှိသောလျှော့စျေးကိုရယူရန်နာရီအနည်းငယ်သာကျန်ရှိသည်။
နောက်ထပ်ယုံကြည်စိတ်ချစရာတစ်ခုခုလိုအပ်ရင်၊ စစ်ဆေးကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုတည်ဆောက်ပုံနှင့်၎င်း၏ခုနစ်ခု (ခုနစ်ခု) minifigures နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအလုပ်ကိုထောက်ခံရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics လျှော့စျေးအပါအ ၀ င်သင်၏ LEGO ကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် - ထံမှ Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO Masters Germany Season3ပြိုင်ပွဲဝင်များအားကြေငြာလိုက်သည်
LEGO ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိချို့တဲ့သောကလေးများအားလှူဒါန်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် →